Xildhibaan Xidig oo ugu yeeray Odayaasha Jubbaland in ay soo xulaan Xildhibaanno karti leh – Kalfadhi
Xildhibaan Xidig oo ugu yeeray Odayaasha Jubbaland in ay soo xulaan Xildhibaanno karti leh
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, oo musharrax u ah Xilka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, ayaa ugu yeeray Odayaasha Dhaqanka Jubbaland in ay aad uga fekeraan soo xulista Xildhibaannada Dowlad Goboleedkaas, “si ay u noqdaan” buu yiri “kuwo karti u leh iney soo doortaan Madaxweynaha ay u baahan tahay Jubbaland shanta sano ee soo socota”.
Shirjaraa’id oo uu maanta ku qabtay Muqdisho, wax yar kadib markii uu ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle, isagoo ka yimid Kismaayo oo uu uga soo dhawaaqay doonistiisa Madaxweynaha Jubbaland, ayuu ku sheegay inuu rajo weyn ka qabo in 75-ka Xildhibaan ee ay Jubbaland yeelan doonto wixii ka dambeeya Agoosta, 2019 ay noqon doonaan Xildhibaanno leh sifaha uu sheegay, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan idinka codsanayaa in aad soo xushaan xildhibaannada” ayuu yiri Xildhibaan (Musharrax) Xidig. “Si ay u dhacdo doorasho xalaal ah, waxaa loo baahanyahay in laga wada tashto nidaamka doorashada” ayuu hadalkiisa raaciyey. Arrintaas waxa uu sheegay Xildhibaanku in ay ka wada hadleen Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe).
“Waxaan Madaxweynaha (Jubbaland) kala hadlay sidii doroashada ay u noqon laheyd mid daah furan, oo ku dhacda waqtigeeda” ayuu Xildhibaan Xidig ku yiri shirkii jaraa’id ee uu maanta ku qabtay Muqdisho. Isla arrintaas isaga oo ka hadlaya ayuu Xildhibaanku maalin ka hor ku yiri dhigaal uu kusoo qoray Feysbuuggiisa “Madaxweynaha Jubbaland waxaan ka rajeynayaa inuu degdeg u magacaabi doono Guddiga Doorashada iyo Xuduudaha” .
Xildhibaan Xidig waxa uu olole ugu jiraa inuu noqdo Madaxweynaha Jubbaland, iyada oo ay isla xilkaas donayaan musharraxiin kale, halka kuwa kalena la filayo iney ku dhawaaqaan musharraxnimadooda xilkaas. Hase ahaatee, Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa lagu eedeeyaa inuu caburiyo dadka ka ra’yiga duwan.
Xildhibaan Sunni: Madaxweyne Xaaf hala heshiiyo Dadka Reer Galmudug
Xildhibaan hore oo dowladda Puntland ku dhaliilay go’aanka ay ku xirayso marsada Kalluumaysiga ee Boosaso